Ny fitaovana maimaim-poana mora indrindra sy mahafa-po indrindra - Hevitra an-tsoratra
Ireo fitaovana fandinganana tranokala dia ampiasaina hanangonana rakitra,. Ny ankamaroan'ny fitaovam-pikarohana dia mampiasa ny angon-drakitra mba hikirakira ny tranonkala ary hahita izay ambaran'ny Internet. Ho an'ny mpampiasa tsy teknika, sarotra ny mahafantatra hoe ny fitaovana fandikana tranonkala no tsara indrindra. Mifanohitra amin'izany, ny mpikaroka ara-tsosialy sy ny orinasa analytics dia mampiasa rindrambaiko maoderina haingana sy rindrambaiko mba hahavitana ny asany, ary tsy manana olana amin'ny fisafidianana ny fitaovana mety.
Outwit Hub dia ny fanampim-panaovana Firefox miaraka amin'ny fanangonana rakitra sy tranonkala maro. Manamora ny fikarohana ao amin'ny Internet izany ary afaka mitahiry ireo angon-drakitra amin'ny fomba tsara sy azo antoka. Ny Outwit Hub dia manana interface malalaka ary afaka manodina tranokala manontolo mandritra ny minitra vitsy. Io dia iray amin'ireo fitaovana fitadiavam-bitsika sy fitaovana mora indrindra amin'ny aterineto.
3. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Pejy misy rohin-drakitra tapaka. Izy io dia manome tahirin-tsakafo maimaika ary azo alaina ho an'ny Linux, Windows, Unix ary Sun Solaris. Amin'ny fampiasana Scraperwiki, azonao atao ny maka maimaim-poana ny rakitra, ny sary ary ny horonan-tsary tsy mila code. Ny fanohanana proxy ihany koa dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana fitadiavan-tserasera hanamafisana ny haingana ary hahazoana antoka ny fanamarinana.
Octoparse dia varo-boba matevina . Tsara ho an'ny karazam-pahalalana rehetra izy ary mahazo ny valiny marina. Ny Octoparse dia azo ampiasaina hanangona tranokala miaraka amin'ny fahafaha-manaony sy ny asany. Manana fomba roa lehibe izy io (Modia Advanced and Mode Wizard) ary mety tsara ho an'ny mpandrindra programa sy ny mpandrindra programa. Ny UI-teboka-pehezo azonao atao dia ahafahanao manangona ny angon-drakitrao amin'ny endritsoratra, HTML, ary Excel ary apetrany ao anaty sarintany henjana mandritra ny segondra.
Kimono no iray amin'ny tsara indrindra sy mora ampiasaina amin'ny tranokala amin'ny Internet. Azonao ampiasaina izany mba handritsahana tranonkala sy bilaogy maro ary haka ny tranokala manontolo ao anaty rakitra sarotra. Izy io no mahalaza indrindra ny mpampiasa azy. Raha vao manomboka Kimono ianao, dia afaka miditra ao amin'ny URL ary manasongadina ny angona tianao haleha. Izany dia hitazona ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny tahiry manokana, mba hahafahanao mampiasa azy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Manohana fiteny 13 mahery i Kimono ary manome ny fanohanan'ny FTP an'ireo mpampiasa azy.
Mozder dia fampitomboana malaza amin'ny asa sy ny karazan-javatra maro. Manampy amin'ny mpikaroka momba ny angon-drakitra, mpizara dizitaly ary programmera. Azonao atao ny manondrana ny angon-drakitrao ao amin'ny takelaka Google, ary i Mozenda dia tsy mampandefitra velively ny kalitao. Zava-dehibe ho an'ny mpandidy sy ny manam-pahaizana izay miasa tsara ao amin'ny tranonkalanao Source .